Senatarro, Wasiir ku xigeen iyo mas’uuliyiin kale oo goordhow lagu soo celiyay magaalada Muqdisho – Kalfadhi
Senator Ilyaas Cali Xasan, Senator Zam Zam Daahir iyo Wasiir Kuxigeenka Tamarta iyo Biyaha Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Libaax Ibraahim oo xalay ku xanibnaa Garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ayaa saaka dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho sida uu goordhow shaaciyay Senator Ilyaas.
Senator Ilyaas Cali Xasan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ay ku soo nabad noqdeen magaalada Muqdisho islamarkaana uu faah faahin ka bixin doono waxyaabihii ay la kulmeen mudadii ay ku sugnaayeen Kenya.
“Alxamdullilaah Muqdisho ayaa nabad ugu soo guryo noqonay aniga iyo dhamaan mas’uuliyiintii kale ee aan wada soconay, faah faahinna waan idinla wadaagi doonaa” ayuu yiri Senator Ilyaas Cali Xasan oo katirsan xubnihii xalay ku xanibnaa Garoonka diyaaradaha ee dalka Kenya.
Wasiir ku xigeenka Tamarta iyo Biyaha ee Xukuumadda ee Soomaaliya Cusmaan Libaax Ibraahim ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ay seexdeen Garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. Wasiirka ma bixin faah faahin intaas ka dheer.
“Xalay waxaan seexanay gudaha garoonka diyaaradaha ee Nairobi waana nabad qabnaa waxaana ku soo wajahanahay dalkaynna Hooyo” ayuu yiri Cusmaan Libaax Ibraahim oo katirsan Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Soomaaliya.